Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt Hụrụ Mbelata na Okporo :zọ: A na-akụ ihe kpatara ya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt Hụrụ Mbelata na Okporo :zọ: A na-akụ ihe kpatara ya
Inweta njem nleta • Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mgbapu a metụtara oke njem FRA - Ọtụtụ ọdụ ụgbọelu Fraport zuru ụwa ọnụ na-ekwupụta uto okporo ụzọ.
Na Nọvemba 2019, Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (FRA) nabatara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 5.1 - na-anọchite anya mbelata 3.4 ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa n'afọ gara aga. Oge ụgbọ elu oyi na-agwụ ike na ụbọchị abụọ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ Lufthansa nwere mmetụta na-adịghị mma na ọnụọgụ ndị njem. Na-enweghị mmetụta iku ahụ, ndị njem FRA gaara agbadata naanị ntakịrị site na 1.1 pasent kwa afọ.
Congbọ njem ndị ọzọ na Frankfurt gara n'ihu na-eto n'ike n'ike site na pasent 2.1. N’ụzọ megidere nke ahụ, trafficgbọ njem Europe dara pasent 6.5 n’ụzọ dara n’ihi enweghị ego nke ụgbọelu na ihe ndị ọzọ. Movementsgbọ elu ụgbọ elu jiri pasent 5.8 belata na nkwụsị 38,790 na ọdịda. Ego buru ibu buru ibu (MTOWs) jikọtara ya site na 4.0 pasent ruo ihe dịka nde tọn 2.4. N’igosi nwayọ nwayọ na-aga n’ihu nke akụnụba ụwa, ibu (nke gụnyere ikuku na ikuku) dara site na pasenti 5.0 rue 186,670 metric tọn.
Onye isi oche ndị isi oche Fraport, Dr. Stefan Schulte, kwuru, sị: “Mgbe anyị nwesịrị okporo ụzọ siri ike nke afọ a ruo ugbu a, anyị nwere ndalata pụtara ìhè na November, ọkachasị n'ihi mwakpo. N’ihi nke a, anyị na-atụ anya na njem ndị njem afọ zuru ezu na Frankfurt na-eto na nwayọ nwayọ nwayọ karịa amụma anyị gara aga nke ihe dị ka pacenti abụọ ma ọ bụ atọ. Agbanyeghị nwayọ nwayọ okporo ụzọ, anyị na-ejigide echiche ego anyị afọ 2019 niile - na-akwado nke ọma na arụmọrụ ego emere na Frankfurt na azụmaahịa mba ụwa. "
N'akụkụ Group ahụ, ọdụ ụgbọelu dị na pọtụfoliyo mba ofesi rụrụ ọrụ nke ọma na Nọvemba 2019. N'ịbụ ndị enweghị ego nke ụgbọelu Adria Airways na-ebu n'ụlọ na ihe ndị ọzọ metụtara, Slovenia's Ljubljana Airport (LJU) kwuru na 27.0 pasent ọdịda na njem nke ndị njem 85,787. Na ọdụ ụgbọ elu abụọ nke Brazil nke Fortaleza (FOR) na Porto Alegre (POA) hụrụ ka okporo ụzọ okporo ụzọ jikọtara na 2.2 pasent karịa ihe karịrị 1.3 nde ndị njem. Nke a bụ n'ihi enweghị ego Avianca Brasil na ụgbọ elu Azul na-ebelata onyinye ụgbọ elu ya. Peru si Lima Airport (LIM) dere a 6.9 percent na-awụlikwa elu na okporo ụzọ na-
ụfọdụ ndị njem 1.9 nde.
Site na ndị njem 727,043 na mkpokọta, ọdụ ụgbọelu Greek nke 14 Greek nke nọgidere na ọkwa nke afọ gara aga (pasent 0.1). Bulgaria's Varna (VAR) na ọdụ ụgbọ elu Burgas (BOJ) debanyere aha ndị njem 83,764 - na-eto site na 22.7 pasent, n'agbanyeghị na ọ bụ obere okporo ụzọ
Ọnwa Nọvemba n'afọ gara aga.
Ọdụ ụgbọ elu Antalya (AYT) na Turkey nabatara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị njem 1.4, na-anọchite anya uru nke 11.8 pasent kwa afọ. Fficgbọ njem na ọdụ ụgbọ elu Pulkovo nke St. Petersburg (ikanam) na Russia debara aha pasent 6.8 maka ihe ruru nde mmadụ 1.4. N’ọdụ ụgbọ elu Xi’an (XIY) na China, okporo ụzọ rịgoro pasent 4.9 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị njem 3.8.